चार कोठाको घर बनाउन सिमेन्टमा कति खर्च लाग्छ? – Koshidaily
मुख्य पृष्ठसमाचारचार कोठाको घर बनाउन सिमेन्टमा कति खर्च लाग्छ?
घर बनाउन सिमेन्ट अत्यावश्यक सामग्री हो। सहरी क्षेत्रमा मात्रै होइन ढुंगा-माटोले बन्ने गाउँका घरमा पनि सिमेन्टले स्थान ओगट्न थालेको छ। बजारमा मुख्यतः दुईथरि सिमेन्ट पाइन्छ- ओपिसी (अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट) र पिपिसी (पोर्टल्यान्ड पोज्जोलोना सिमेन्ट)। सिमेन्टका प्रकार, विशेषता र काम गर्ने तरिकाबारे हामीले अघिल्लो स्टोरीमा चर्चा गर्‍यौं।
यहाँ हामीले काठमाडौंमा आठ सय वर्गफिटमा बन्ने चार कोठे, एकतले ढलान घर बनाउन चाहिने सिमेन्ट र त्यसको लागतबारे चर्चा गरेका छौं। यसबारे हामीलाई इञ्जिनियर तथा निर्माण कम्पनी ‘बिल्ड इनोभेसन’ का सिइओ अनोज खतिवडाले जानकारी दिएका छन्।